आजको राशिफल– २०७६ फागुन २२ गते बिहिबार – Nepal Japan
आजको राशिफल– २०७६ फागुन २२ गते बिहिबार
नेपाल जापान २२ फाल्गुन ११:३२
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) :
परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ, आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। मौका आए पनि काम थाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला।
व्यवसायमा अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ने देखिन्छ। सेवामूलक कामबाट सामान्य उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। ठूलो फाइदा नदेखिएकाले लाभ उठाउन हतार नगर्नुहोला।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) :
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) :
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) :
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) :
मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्दै मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ। दैनिक काममा पनि उल्लेख्य फाइदा हुनेछ। थोरै लगानीबाट मनग्गे नाफा उठाउन सकिनेछ। भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) :
मिहिनेतले नयाँ जिम्मेवारी दिलाउनेछ। तारिफयोग्य कामको चर्चा हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। तर आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। अरूका लागि बुद्धि र समय खर्चनुपर्ला। सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि लक्ष्यमा पुग्न मुस्किल पर्नेछ। परिस्थितिवश चिताएको काम बीचमा रोकिन सक्छ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) :
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) :
परिस्थितिवश आँटेको काममा विलम्ब हुनेछ। अस्वस्थताका बाबजुद कामको जिम्मेवारी बढ्नेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा फाइदाका स्रोत पहिचान गर्न सकिनेछ। नयाँ काम थाल्न केही समय पर्खनुपर्ला। गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। पछाडिबाट अवरोध पुर्याउनेहरू सक्रिय रहे पनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिने हुँदा काम बन्नेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) :
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) :
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) :
प्रयत्न गर्दा चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। व्यापारमा धेरै फाइदा नभए पनि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान वा अनुयायीको साथले पनि हिम्मत जगाउनेछ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) :
केही समय लागे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। साथीभाइले साथ दिनेछन्। पशुधन र जमिनबाट लाभ हुनेछ। मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा फाइदा हुनेछ। परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ। तर बेसुरमा वचन दिनाले दुःख पाइनेछ। साझेदारीमा देखिने समस्याले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ।
आजको राशिफल– २०७६ चैत्र १० गते सोमबार
आजको राशिफल– २०७६ चैत्र ८ गते शनिबार
आजको राशिफल– २०७६ चैत्र ७ गते शुक्रबार
आजको राशिफल– २०७६ चैत्र ५ गते बुधबार
वामग्तीमा फोहर कम देखियो, कारण- वर्षा कि जनचेतना ?
१८ असार १६:३७
१८ असार १६:०५
१८ असार १५:२२
धौलागिरि आधार शिविरमा भेडाका बथान
१८ असार ११:३८
पोखरामा पनि जडान भो थोत्रा नोटबाट ब्रिकेट बनाउने मेसिन
१८ असार ११:१५
४. नहर फुटेर बस्तीमा पस्दा हेम्जाका ३०० घर डुबानमा
५. रेडियो नेपाल डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रवेश (फोटोहरुसहित)